Safiirka Soomaaliya ee Kenya oo jawaab kulul ka bixiyay hadalkii Raila Odinga – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Safiirka Soomaaliya ee Kenya oo jawaab kulul ka bixiyay hadalkii Raila Odinga
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa si caro leh uga hadlay hadal uu dhawaan jeediyay ra’iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga, haatana ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee CORD la yiraahdo, kaasoo la xariiray inuu maamulka Somaliland u aqoonsan yahay dal Soomaaliya ka madax banaan.
Danjire Jamaal Maxamed ayaa hadalka Raila Odinga ku tilmaamay mid mas’uuliyad darro ah, islamarkaana uu hadalkaasi xoojinayo kala go’a Soomaaliya, waxaana uu intaas ku daray in safaarad ahaan ay aad u diidan yihiin wararka noocaas oo kale ah in madaxi tiraahdo.
Raila Odinga ayaa laga soo xigtay inuu mar yiri isagoo jooga dalka Ingiriiska oo uu kulan kaga qeyb galay “Waxaan aad u taageerayaa aqoonsi la siiyo Somaliland oo aan u arko dal madax banaan”, taas oo sida muuqata dhaawaci karta midnimada Soomaaliya.
Dhinaca kale, safiirka Soomaaliya ee u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa hadalka Raila Odinga ku tilmaamay mid qaraar ah oo aan ka tarjumeyn dowladda Kenya, waxaana uu intaas ku daray in arrimaha noocaan oo kale ah ay dadka Soomaaliyeed u yaalaan.
Sidoo kale, warbaahinta dalka Kenya ayaa mudooyinkii ugu dambeysay aad u hadal haysay xiriir dhex maray dowladda Kenya iyo madaxda maamulka Somaliland, kadib markii madax ka tirsan dowladda Kenya ay dhawaan tageen magaalada Hargeysa.
Waftiga Kenya tagay dhawaan waxaa hogaamiyay gudoomiyaha gobolka Jaadku ka baxo ee Miiraa Peter Munya waxaana mas’uulkaas sheegay in jaadka Kenya ka baxa marka ay Hargaysa geeyaaan ka rajaynayaan in laga helo lacag dhan billion oo lacagta Kenya.
Si kastaba ha ahaate, gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya oo ku dhawaaqay in Soomaaliya inteeda kale ay ka go’een kadib markii ay dhacday dowladii dhexe ayaan ilaa iyo haatan weli helin wax aqoonsi ah, taas oo ay siyaasiyiinta qaar ku tilmaameen inay tahay riyo aan weli dhamaan.